Xidlhibaanada BF oo jawaab kulul ka bixiyey falkii ay ku kaceen ciidamada Kenya | Somalia News
Muqdisho (Caasimada Online) – Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka geysanayaan gobolka Gedo.
Xildhibaanadan ayaa si gaar ah uga hadlay fal isugu jira dil iyo dhaawac oo ciidamada Kenya ugu geysteen dad shacab ah deegaanka Yadoo oo hoostaga magaalada Ceelwaaq.
Xildhibaan Haashim Nuur Aadan oo shirkaan jaraa’id ka hadlay ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ka dambeeyaan ciidamo ka tirsan kuwa Kenya, balse aan qeyb ka aheyn, sida uu sheegay howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in dowladda Kenya looga baahan yahay inay si deg-deg ah ah uga jawaabto falkaasi arxan darrada ah.
Dhankiisa Xildhibaan Daahir Jeesow oo madasha ka hadlay ayaa cod dheer ku sheegay in Kenya ay weligeed dhibaato ka geysan jirtay deegaanada Jubbaland, isaga oo tilmaamay in tacadiyadaas aan looga hari doonin, waxna laga weydiin doono.
Si kastaba ha’ahaatee qeylo dhaanta ka soo yeertay xuildhibaanadan ayaa ku soo aadeysa, xilli haatan cabsi xoogan oo ay qabaan dadka deegaanka ay ka taagan tahay duleedka degmada Ceelwaaq oo ay duqeymo joogto ah ka fuliyaan diyaaradaha Kenya.
This post first appeared on Caasimada Online. Read the https://www.caasimada.net/xidlhibaanada-bf-oo-jawaab-kulul-ka-bixiyey-falkii-ay-ku-kaceen-ciidamada-kenya/original article
Previous article(Sawirro) Taliyaha AMISOM oo booqday ciidamada Itoobiya ee jooga Baydhabo
Next articleDaawo:-Dhismaha iskuul loogu magac daray Qanyare oo la dhagax dhigay & Masuuliyiinta goob jooga ka ahaa !!
Rooble oo u laab qaboojiyey Mucaaradka & Laftagareen oo weeraray Xasan Shiikh
Ra’iisul Wasaare Rooble oo Talisyada CXD iyo AMISOM ee Koofur Galbeed kala shiray Amniga iyo Howlgallada ka dhanka ah argagixisada “SAWIRRO”
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay taliyeyaasha iyo saraakiisha Qeybta 60aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo Taliyeyaasha Ciidanka AMISOM ee ku sugan Koofur Galbeed. Ra’iisul Wasaare Rooble oo uu wehliyay madaxweynaha Koofur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, ayaa taliyeyaasha kala hadlay guud ahaan amniga Koofur Galbeed, Sugidda amniga doorashooyinka dalku galay iyo dardar galinta dagaalka iyo howlgallada ka dhanka kooxda argagixisada ah ee Alshabaab. “Waxaan idinku boorrinayaa in aad xil weyn iska saartaan sugidda amniga guud ahaan, gaar ahaan xilligan ay doorashooyinku socdaan. Waxaa kaloo la doonayaa in aysan hakad galin howlgallada ka dhanka ah argagixisada Alshabaab ee bulshadeenna dhibaatada ku haya oo naftooda iyo hantidoodaba burburinaya” ayuu Ra’iisul Wasaare Rooble ku yiri Saraakiisha Ciidanka Xooogga Dalka iyo kuwa AMISOM ee uu la kulmay. Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa maanta soo gabagabeeyay safar 3 cisho qaatay oo isaga iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay ku tageen magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee Koofur Galbeed Soomaaliya. Ra’iisul Wasaaraha ayaa intii uu joogay Koofur Galbeed waxa uu xarigga ka jaray mashaariic kala duwan oo isugu jira Iskuullo, xarumo caafimaad iyo adeegyo kale oo dowladdu ka hirgaliay Koofur Galbeed Soomaaliya. Sidoo kale Ra’iisul Rooble ayaa dhagax dhigay dhowr mashruuc oo ay ka mid yihiin xarumo caafimaad, dhismeyaal wasaaradeed iyo goobo waxbarasho oo Dowladda Federaalka Soomaaiya ka hirgalineyso Koofur Galbeed Soomaaliya.
Dagaalka ka alloosan gobolka Tigreega ee Itoobiya
November 25, 2020 | Published by: yaska Dagaalka ka socda gobolka Tigreega ee Itoobiya, ayaa waxa uu bilaamay afartii bishan kow iyo tobbnaad ee sannadkan aynu ku jirno, inkastoo labada dhinacba midba midka kale ku eedaynaayo in uu sharci jabin sameeyay, haddana wali ma muuqato in labada darafba ay u eegyihiin in ay dagaalka joojiyaan. Tigreega oo qayb ka ahaa jabhadihii jabiyay dawladii Dhargiga sannadkii 1991, ayaa iyagu ahaa awoodii dalkaas ka talinaysay tan iyo ilaa 2018, oo xilka u yimiday raysalwasraha hada talada dalka haya oo isagu ka soo jeeda qoomiyada ugu badan dalka Itoobiya, waa Oramadee. Ninkan 44ka sanno jira ayaa layimiday Itoobiya ka duwan tii Tigreegu maamulaayay, waxanu qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin in ay dib u soo noqdaan dhamaan xubnihii mucaaradka ahaa ee dibada ku maqnaa, la heshiisiinta jabahadii dalka, fur-furka siyaasada dalka, xoriyada hadalka iyo mida ugu cuslayd oo ah in uu Erateriya ku wareejiyo dhulkii ay Itoobiya isku hayeen, una ku heley sannadkii hore abaal-marinta bilada nabada adduunka ee looyaqaan ( Nobel Peace Prize ). Dhawaan ayay ahayd markii maamulka Tigreegu ay gantaalo ku tureen caasimada dalka ay jaarka yihiin ee Asmra iyo waliba sidoo kale caasimda maamulka Amxaarada ee Bahar-daar. Imika se raysalwasaraha Itoobiya Abyi Ahmed ayaa sheeganaya guulo in ay ka gaadheen dagaalka ciidanka Fadaralka Itoobiya, oo waliba ay u jiraan caasimada maamulka Tigreega ee Makalle, masaafo qiyaas ahaan ah 60 Kilomiter ama 37 Mayl. Balse, hogaamiyaha maamulka Tigreega Debretsion Gebremichael, ayaa sheegay “in uu Abyi rabbo dib-ugurasho xeelad dagaal oo ciidankiisa la wiiqay, wuxuuna intaa raaciyay in ay yihiin Tigreegu dad mabaadii leh, oo diyaar u ah in ay u dhintaan xaqna u leeyihiin sidii ay u difaaci lahaayeen maamulkooda. Dhanka kale, Abyi ayaa sheegay Axadii dhawayd ” in uu u qabtay in maamulka Tigreegu isku dhiibo mudo saddex cisho ah, kuna daray in ay fulinayaan hawl gal sharci oo lagaga soo horjeedo koox khiyaamaysay wadanka, lana gaadhay marxaladiisii ugu danbaysay”. Waxase, jira inta uu daagalku socday in ay ku dhinteen boqolaal qof, anay ku barakaceen ku dhawaad ilaa 40,000 qof. Inakstoo ay jiraan ergooyin ka yimiday midowga Afrika rabana in arimaha la dhex-dhexaadiyo, uma se eeka in uu u dhago nugulyahay raysalwasaruhu. Dagaalkani se, waa mid u eeg in uu qaybinaayo qoomiyadaha Itoobiya, oo ahaa kuwo marka horeba nidaam xoog badani isku hayay oo ay qoomiyada Tigreegu hor boodaysay, balse imika ay tahay in aaminadii dawladnimadu meesha ka baxayso inkastoo uu dagaalkani kudanbayn doono saddex arimood mid kooduun oo kala ah: 1: in haddii ay guulaystaan ciidanka Faderaalka Itoobiya, waa in ay u dhisaan maamul cusub si loo soo celiyo nabbada iyo kala danbaynta, inkastoo ay wali sii jiri karaan qul-qulotooyin daba dheerada oo aan deg-deg xal loogu heli doonin. 2: in ay adkaato in Makalle laga saaro ciidamada Tigreega oo ah caasimada maamulkaas oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyasay ilaa 500,000 oo qof, iskuna arka in maamulkoodu lagu soo doontay oo difaac ku jirra. 3. In haddii dagaalku si sahlan ku dhammaan waayo, inta dhex-dhexaadiyaal soo fara galiyaan oo ay suuro gal noqoto in nidaamka guud ee hada Itoobiya ka dhisan qaab kale loo dhigo, lana bad-baadiyo dalkaas. Qore: Caynaan Farax Caynaan. Hargeisa, Somaliland.